Mampifandray ny tanànan'i Ho Chi Minh sy ny renivohitra Kambodziana Phnom Penh i Vietjet
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mampifandray ny tanànan'i Ho Chi Minh sy ny renivohitra Kambodziana Phnom Penh i Vietjet
Vietnamjet dia nanomboka nivarotra tapakila amin'ny zotra Ho Chi Minh City (Vietnam) - Phnom Penh (Kambodza). Hatao amin'ny 24 novambra 2017 ny zotra vaovao, mitady ny hihaonana amin'ny fitakiana varotra sy fitetezana eo anelanelan'ny toekarena sy toekarena roa malaza any Vietnam sy Kambodza.
Ny làlan'ny Ho Chi Minh City - ny lalana Phnom Penh dia hiasa amin'ny lalana mandroso sy miverina amin'ny 45 minitra isaky ny tongotra. Miala ny tanànan'i Ho Chi Minh amin'ny 17 ora (ora eo an-toerana) ny sidina ary tonga ao Phnom Penh amin'ny 35:18 (ora eo an-toerana). Ny sidina miverina dia miainga ao Phnom Penh amin'ny 20:19 (ora eo an-toerana) ary tonga ao amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh amin'ny 30:20.
Phnom Penh Capital no tanàna lehibe indrindra, ary ny foibe ara-politika, ara-koltoraly, ara-barotra amin'ny fanjakan'ny Kambôdza. Miaraka amin'i Siem Reap, mahasarika mpizahatany maro i Phnom Penh miaraka amin'ireo tranobe maritrano maritrano malaza Khmer, fomba amam-panao ara-kolotsaina ary fivarotana asa-tanana maro be.
Miaraka amin'ny serivisy manara-penitra, tapakila tapakila manokana sy kilasy tapakila isan-karazany, manolotra sidina mahafinaritra i Vietjet miaraka amina ekipa mpandeha sidina iray mafampana sy mahafinaritra, seza milay, sakafo mafana matsiro ary fahagagana manokana hafa natolotry ny mpanamory fiaramanidina mahafinaritra sy mahafinaritra. .
Qatar Airways dia namelombelona ny kitapo fidirana an-tsehatra tany an-danitra